Tadidio Foana Izay Tena Zava-dehibe: Zon’i Jehovah Hitondra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
“Mba ho fantatry ny olona fa ianao irery ihany, izay manana anarana hoe Jehovah, no Avo Indrindra ambonin’ny tany manontolo!”—SAL. 83:18.
HIRA: 9, 22
INONA NO NIANARANAO?
Nahoana no tokony ho zava-dehibe amin’ny olona rehetra ny hanaporofoana fa i Jehovah no manana zo hitondra?
Ahoana no nampisehoan’i Joba fa manohana ny zon’i Jehovah hitondra izy? Inona anefa no fahadisoana nataony?
Inona avy no tsy maintsy ataontsika raha tiantsika haseho hoe manohana ny zon’i Jehovah hitondra isika?
1, 2. a) Inona no tokony ho zava-dehibe amin’ny olona rehetra? b) Nahoana isika no mila mitadidy an’izany foana?
NY VOLA no zava-dehibe indrindra amin’ny olona maro. Variana manangona harena izy ireo, na variana miaro ny fananany. Misy indray mihevitra hoe ny fianakaviana no zava-dehibe indrindra, na ny fahasalamana, na ny zava-bitany.
2 Misy zavatra hafa tokony ho zava-dehibe kokoa amintsika rehetra anefa, dia ny hanaporofoana fa i Jehovah no manana zo hitondra an’izao rehetra izao. Mila mitandrina isika mba tsy hanadino an’izany. Mety ho variana be amin’ny fiainana andavanandro na ny olana mahazo antsika mantsy isika. Raha mitadidy anefa isika hoe tena ilaina ny manohana ny zon’i Jehovah hitondra, dia ho haintsika kokoa ny hiatrika olana, ary hifandray akaiky kokoa amin’i Jehovah isika.
NAHOANA IZANY NO ZAVA-DEHIBE?
3. Inona no nolazain’i Satana momba ny fitondran’i Jehovah?
3 Nataon’i Satana izay hahatonga ny olona hisalasala raha tena manana zo hitondra azy ireo i Jehovah. Tiany hieritreritra izy ireo hoe tsy mahay mitondra i Jehovah, ary misy zavatra tena tsara tsy omeny azy ireo. Ho sambatra kokoa, hono, ny olona raha manao izay tian’izy ireo fa tsy mankatò an’Andriamanitra. (Gen. 3:1-5) Nilaza koa i Satana hoe tsy misy olona manompo an’i Jehovah amin’ny fo manontolo. Raha vao miatrika olana, hono, izy ireo, dia tsy hanaiky an’i Jehovah ho mpitondra intsony. (Joba 2:4, 5) Navelan’i Jehovah handeha àry ny fotoana mba ho voaporofo fa mijaly be ny olona rehefa tsy manaiky an’i Jehovah ho mpitondra.
4. Nahoana no tsy maintsy porofoina raha manana zo hitondra i Jehovah na tsia?
4 Fantatr’i Jehovah hoe diso ny tenin’ny Devoly. Nahoana anefa izy no avelany hanaporofo raha marina ny teniny na tsia? Satria mahakasika ny olona sy ny anjely koa izany. (Vakio ny Salamo 83:18.) Tsy nanaiky an’i Jehovah ho mpitondra i Adama sy Eva, ary maro no nanao toa azy ireo. Mety hisy anjely na olombelona hieritreritra àry hoe sao dia mba marina ihany ny tenin’ny Devoly. Raha mbola misalasala momba izany izy ireo, dia tsy hiray saina mihitsy ireo firenena sy foko ary fianakaviana samy hafa. Rehefa voaporofo kosa hoe i Jehovah ihany no manana zo hitondra, dia hanaiky ny fitondrany ny olona rehetra mandrakizay. Hiray saina indray ny zavaboary rehetra amin’izay.—Efes. 1:9, 10.
5. Ahoana no ampisehoantsika fa manohana ny zon’i Jehovah hitondra isika?
5 Ho voaporofo amin’ny farany hoe i Jehovah no manana zo hitondra. Ho hita fa tsy mahomby ny fitondran’i Satana sy ny an’ny olombelona ka hofoanana. Ny Fanjakan’ny Mesia no asain’Andriamanitra hitondra ny olona, ary hahomby ny fitondrany. Hisy olona tsy hivadika mihitsy, ka ho voaporofo fa vitan’ny olombelona ny manohana foana ny zon’i Jehovah hitondra. (Isaia 45:23, 24) Raha tsy mivadika mihitsy ianao, dia ho anisan’ireo manohana ny zony hitondra. Te ho anisan’izy ireo ve ianao? Tadidio foana àry hoe zava-dehibe ny hanaporofoana fa i Jehovah no manana zo hitondra.
ZAVA-DEHIBE KOKOA NOHO NY FAMONJENA ANTSIKA
6. Ahoana no tokony hiheverantsika ny fanamarinana ny zon’i Jehovah hitondra?
6 Hitantsika teo aloha fa tena ilaina ny hanaporofoana hoe i Jehovah no manana zo hitondra. Mbola zava-dehibe noho izay hahasambatra antsika tsirairay izany. Tsy midika anefa izany hoe tsy zava-dehibe ny famonjena antsika, na hoe tsy tena miraharaha antsika i Jehovah. Ahoana no ahalalantsika an’izany?
7, 8. Inona no ifandraisan’ny zon’i Jehovah hitondra sy ny fanatanterahany ny fampanantenany?
7 Tena tia antsika i Jehovah matoa nahafoy ny Zanany hatao sorona, mba hamonjena antsika ka hahafahantsika hiaina mandrakizay. (Jaona 3:16; 1 Jaona 4:9) Raha tsy manatanteraka an’izany fampanantenany izany anefa izy, dia hanararaotra hanakiana ny fitondrany ny Devoly. Ho afaka hilaza izy hoe mandainga i Jehovah sady tsy manao ny rariny, ary misy zavatra tsara tsy omeny antsika. Hahazo vahana koa ny mpanohitra izay milaza hoe: “Aiza akory izay fanatrehany nampanantenaina eo? Efa hatramin’ny andro nahafatesan’ny razantsika no tsy niova ny zava-drehetra fa mbola mitovy tanteraka amin’izay nisy hatrany am-piandohan’ny famoronana.” (2 Pet. 3:3, 4) Hamonjy ny olona mankatò àry i Jehovah, ary anisan’ny fomba hanaporofoany izany hoe manana zo hitondra izy. (Vakio ny Isaia 55:10, 11.) Maneho fitiavana foana koa i Jehovah rehefa mampihatra ny fahefany. Azo antoka àry fa ho tiany foana sy ho sarobidy aminy foana ny mpanompony tsy mivadika.—Eks. 34:6.
8 Ekentsika fa tena mila porofoina hoe i Jehovah no manana zo hitondra. Tsy midika anefa izany hoe tsy misy dikany isika na tsy zava-dehibe ny famonjena antsika. Manampy antsika kosa izany mba hitadidy foana hoe iza amin’ireo no tena zava-dehibe. Hanohana ny zon’i Jehovah hitondra foana isika amin’izay.
LESONA AVY AMIN’NY TANTARAN’I JOBA
9. Inona no nolazain’i Satana momba an’i Joba? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
9 Tena ilaina ny manaiky hoe ny fanamarinana ny zon’i Jehovah hitondra no zava-dehibe kokoa noho ny famonjena antsika. Manasongadina an’izany ny bokin’i Joba, izay anisan’ny boky ao amin’ny Baiboly nosoratana voalohandohany. Hitantsika ao fa nilaza i Satana hoe hivadika amin’i Jehovah i Joba raha mijaly be. Nampirisika an’i Jehovah mihitsy aza izy mba hampijaly azy. Tsy nanaiky anefa i Jehovah, fa i Satana no navelany hanao izany. Hoy izy: ‘Eo am-pelatananao ny fananany rehetra.’ (Vakio ny Joba 1:7-12.) Maty ny mpanompon’i Joba rehetra, taoriana kelin’izay, fongana ny fananany, ary maty koa ny zanany folo tena tiany. Nataon’i Satana izay hahatonga an’izany rehetra izany ho hoatran’ny hoe avy amin’i Jehovah. (Joba 1:13-19) Nataony voan’ny aretina mampanaintaina sy mahatsiravina be koa i Joba avy eo. (Joba 2:7) Nanampy trotraka an’izany ny teny mahakivy nolazain’ny vadiny sy ireo lehilahy telo niseho ho namany.—Joba 2:9; 3:11; 16:2.
10. Inona no fahadisoana nataon’i Joba, na dia tsy nivadika tamin’i Jehovah aza izy?
10 Tsy nety nivadika tamin’Andriamanitra i Joba, ka voaporofo hoe diso ny tenin’i Satana. (Joba 27:5) Nisy fotoana anefa i Joba nanadino an’izay tena zava-dehibe. Lasa variana nanamarin-tena izy, ary nieritreritra fa tokony hohazavaina aminy hoe nahoana izy no nijaly. (Joba 7:20; 13:24) Ara-dalàna angamba, hoy ianao, raha niteny an’izany izy, satria izy aza nijaly be. Nanitsy an’i Joba anefa i Jehovah. Inona no nolazainy taminy?
11, 12. Inona no nataon’i Jehovah tsapan’i Joba, ary ahoana no nataon’i Joba?
11 Toko efatra be izao (38-41) ao amin’ny bokin’i Joba no misy ny tenin’i Jehovah taminy. Tsy nolazain’i Jehovah mihitsy anefa hoe nahoana i Joba no nijaly. Tsy izany mantsy no tena tian’i Jehovah horesahina, sady hoatran’ny hoe niaro tena izy raha nanao an’izany. Tiany hahatsapa kosa i Joba hoe faran’izay bitika izy raha oharina aminy. Tiany ho tonga saina koa izy hoe misy zava-dehibe kokoa tokony hoeritreretiny. (Vakio ny Joba 38:18-21.) Nanampy an’i Joba izany mba tsy ho variana tamin’ny olana nahazo azy, fa hitadidy hoe inona no tena zava-dehibe.
12 Ratsy fanahy ve i Jehovah satria nivantana be izy niteny an’i Joba nefa i Joba aza vao avy nijaly be? Tsia! Tiany i Joba matoa nanariny. I Joba koa tsy nieritreritra hoe ratsy fanahy izy. Nankasitraka an’ilay torohevitra izy, ary nilaza mihitsy hoe: “Tsoahako ny teniko, ary mibebaka eto amin’ny vovoka sy ny lavenona aho.” (Joba 42:1-6) Nananatra an’i Joba koa ny tovolahy atao hoe Eliho, taloha kelin’izay. (Joba 32:5-10) Nanaiky ny torohevitr’i Jehovah i Joba ary nanova ny toe-tsainy. Nilaza àry i Jehovah fa nankasitrahany i Joba satria tsy nivadika na dia nijaly aza.—Joba 42:7, 8.
13. Nahoana i Joba no mbola nila an’ilay torohevitr’i Jehovah, na dia efa tsy nijaly intsony aza?
13 Azo antoka fa mbola nahasoa an’i Joba ny torohevitra nomen’i Jehovah azy, na efa tsy nijaly intsony aza izy. “Nitahy ny niafaran’ny fiainan’i Joba mihoatra noho ny tamin’ny voalohany” i Jehovah. Lasa “nanan-janakalahy fito sy zanakavavy telo koa izy.” (Joba 42:12-14) Na dia tena tiany aza anefa ireo zanany ireo, dia azo antoka hoe nalahelo an’ireo zanany novonoin’i Satana izy. Mety ho mbola tsy afaka tao an-tsainy koa ny zavatra nanjo azy. Na fantany aza tatỳ aoriana ny antony nahatonga azy hijaly, dia mety ho nieritreritra izy indraindray hoe fa naninona izy no navelan’Andriamanitra hijaly be hoatr’ireny. Afaka nitadidy ny torohevitra nomen’Andriamanitra azy àry izy, raha nieritreritra an’izany. Ho nampahery azy izany, sady ho nanampy azy hanana toe-tsaina tsara.—Sal. 94:19.
Miezaha tsy hifantoka be amin’ny olana mahazo anao, fa hitadidy hoe ilaina ny manohana ny zon’i Jehovah hitondra (Fehintsoratra 14)
14. Inona no ianarantsika avy amin’ny tantaran’i Joba?
14 Hahay hifantoka amin’izay tena zava-dehibe isika raha misaintsaina ny tantaran’i Joba. Hampahery antsika koa izany. Nasain’i Jehovah nosoratana ao amin’ny Baiboly mantsy ny tantarany mba “ho fianarantsika, mba hananantsika fanantenana amin’ny alalan’ny fiaretantsika sy ny fampiononana avy ao amin’ny Soratra Masina.” (Rom. 15:4) Inona àry no ianarantsika avy amin’ny tantarany? Tsy tokony ho variana loatra amin’ny fiainantsika isika ka hanadino hoe tena zava-dehibe ny hanaporofoana fa manana zo hitondra i Jehovah. Tadidio koa fa raha tiantsika ny hanohana ny zony hitondra, dia tokony hanahaka an’i Joba isika ka tsy hivadika mihitsy na dia misy olana aza.
15. Inona no ho vokany raha tsy mivadika isika rehefa misy olana?
15 Fantatsika àry izao fa tsy hoe tezitra amintsika i Jehovah matoa isika mijaly. Rehefa misy zavatra mampijaly antsika, dia azontsika aseho tsara fa ekentsika hoe i Jehovah ihany no manana zo hitondra. (Ohab. 27:11) Tena sarobidy àry ny tsy fivadihantsika, ary mampahery ny mahalala an’izany. ‘Hankasitrahan’Andriamanitra’ isika raha miaritra, ary vao mainka hino hoe ho tanteraka ny zavatra antenaintsika. (Vakio ny Romanina 5:3-5.) Hita amin’ny tantaran’i Joba fa ‘be fitiavana sady mamindra fo’ i Jehovah. (Jak. 5:11) Azo antoka àry fa hovaliany soa isika sy izay rehetra manaiky azy ho mpitondra. Tena tsara ny mahalala an’izany, satria hanampy antsika “hiaritra tanteraka sady haneho fahari-po amim-pifaliana” izany.—Kol. 1:11.
MIFANTOHA FOANA AMIN’IZAY TENA ZAVA-DEHIBE
16. Nahoana isika no tsy maintsy mitadidy foana hoe zava-dehibe ny hanaporofoana ny zon’i Jehovah hitondra?
16 Marina fa sarotra ny mitadidy foana hoe zava-dehibe ny hanaporofoana fa i Jehovah ihany no manana zo hitondra. Mety ho mafy loatra mantsy indraindray ny olana mahazo antsika. Na ny olana madinidinika aza mety ho lasa hoatran’ny hoe goavana be rehefa eritreretina foana. Mila mitadidy foana àry isika hoe tena ilaina ny manohana ny zon’i Jehovah hitondra, rehefa miatrika zava-tsarotra isika.
17. Inona no ho vokany raha mandray anjara tsy tapaka amin’ny asa ampanaovin’i Jehovah antsika isika?
17 Ho afaka hitadidy an’izay tena zava-dehibe isika, raha mandray anjara tsy tapaka amin’ny asa ampanaovin’i Jehovah antsika. Izany no nataon’ny anabavy iray atao hoe Renee. Tapaka lalan-dra izy ary voan’ny kansera, dia nanaintaina foana. Nanararaotra nitory tamin’ny mpiasa sy ny marary ary ny mpamangy anefa izy, tany amin’izay hopitaly nitsaboana azy. Roatokombolana latsaka izy, indray mandeha, no tany amin’ny hopitaly, nefa nahavita nitory adiny 80. Notadidiny foana, na tamin’izy efa ho faty aza, hoe mila manohana ny zon’i Jehovah hitondra izy. Tsy kivy be izy vokatr’izany.
18. Inona no azontsika ianarana avy amin’ny Ranabavy Jennifer?
18 Te hanohana ny zon’i Jehovah hitondra foana koa isika, na dia rehefa miatrika an’ireo olana mitranga eo amin’ny fiainana andavanandro aza. Tafajanona telo andro tany amin’ny seranam-piaramanidina, ohatra, ny anabavy iray atao hoe Jennifer, rehefa niandry raoplanina hodiana. Nolazaina hoe hisy fiaramanidina handeha, nefa tsy nisy indray ilay izy. Hoatr’izany foana no nitranga tamin’izay. Vizana i Jennifer sady nahatsiaro ho irery. Azony natao ny nitsetra tena teo, nefa tsy nanao an’izany izy. Nivavaka tamin’i Jehovah kosa izy mba hanampy azy hitory tamin’ireo olon-kafa voatery niandry ela be hoatr’azy. Nahavita nitory tamin’ny olona maro àry izy, ary be dia be ny boky sy gazety voazarany. Hoy izy: “Tena nanampy sy nanome hery ahy i Jehovah, dia nahavita nidera ny anarany aho na dia tsy mora aza ny nahazo ahy.” Notadidiny foana hoe inona no fikasan’i Jehovah.
19. Inona no ataon’ny mpanompon’i Jehovah?
19 Efa hatramin’ny ela ny mpanompon’i Jehovah no nanohana ny zony hitondra. Mampiavaka ny fivavahana marina amin’ny fivavahan-diso izany. Tsy maintsy miezaka koa àry isika tsirairay izay manaraka ny fivavahana marina, mba hanohana foana ny zon’i Jehovah hitondra.
20. Ahoana no fahitan’i Jehovah ny ezaka ataonao mba hanohanana ny zony hitondra?
20 Matokia fa hitan’i Jehovah hoe miezaka tsy hivadika sy hiaritra fitsapana ianao satria te hanohana ny zony hitondra. Tena sarobidy aminy izany. (Sal. 18:25) Hovelabelarina misimisy kokoa ao amin’ny lahatsoratra manaraka hoe nahoana isika no tokony hanohana ny zon’i Jehovah hitondra, ary ahoana no anaovana an’izany.